Soo deji xogta xogta guud - Geofumadas
Abriil, 2010 topografia
Ka hor inta aynaan arkin tilmaame loogu talagalay Isticmaalka wadarta guud ee caleemaha, kaas oo qabashada macluumaadka u muuqda.
Hadda waxaan arki doonaa sida loo soo dejiyo xogta kombiyuutarka, iyada oo la adeegsanayo mid ka mid ah tusaalayaasha mid ka mid ah farsameyaashayda. Shaqo fiican, jidka. Tani waxaan u isticmaalayaa:
Dhammaan saldhiga Sokkia Set 520
USB-ga wareejinta xogta
Qaar ka mid ah sababo qariib ah, oo leh saldhigtayda koowaad ee meertada, xadhigga wareejinta ayaa dhaawacmay dhowr jeer. Inkastoo wiilasha ay yihiin taxadar, ma heli karno xaq u yeelashada, wax ka badan suurtagalnimada, inaysan lahayn suunka, taas oo si aad ugu xirto daboolka lo'da waxay u adeegsadeen taas ... natiijooyin isku mid ah.
Waxaan arkay aragti kala iibsi (sida midka lagu muujiyay sawirka) kaas oo leh bamka halkaas oo qalabka la geliyo, si aad u xadidan, waa mid waxtarka leh marka loo eego midka ku yaal bartamaha. Waxay igu dhacdaa, in taas xder oo waxaasu waa inay dhacaan, oo wixii ay ku dhacaan waxay sameeyeen wax aan waxba ahayn, taas aawadeed ayaa gubtay.
2 U diyaari saldhiga si aad u wareejiso
Haysashada xawaaraha wareejinta (USB si loo soo saaro qalabka casriga ah), waxaa la cadeeyay in waxa aan rajeyneyno in ay tahay in la gudbiyo macluumaadka, oo ka shaqeeya:
MEM> JOB> markaa waan sameynaa Ku qor.
Guddiga xiga waxaan dooraneynaa Bixinta Badeecada ka dibna Ku qor.
Ka dibna waxaan dooranaa shaqada si loo wareejiyo. U fiirso marka la doorto, halkii aad ka muuqan lahayd tirada dhibcood ee la qabtay, waxaad u beddeleysaa qoraalka Out, taas oo macnaheedu yahay inay diyaar u tahay in la wareejiyo.
Kuwa soo socda waa uun xulashada ikhtiyaarka OK, qaabka SDR33, ka dibna farriin ayaa soo baxaysa oo muujinaysa inaad ku wareejinayso, iyo tirada dhibcood ee geedi socodka. Iska ilaali, tan waxa la sameeyaa ilaa xidhiidhka horey loo qorsheeyey Prolink, kaas oo lagu sharxay hoos.
3 Qalabaynta Prolink
Mashruuca. Taas awgeed, waxanu sameynaa Faylka> Mashruuca Cusub, oo ku qor magaca feylka, kaas oo lagu kaydin doono qaabka SFP. Tani waxay u furan tahay mustaqbalka, haddii aan xirno barnaamijka waxaanan u baahanahay inaan ku soo laabanno mashruuc isku mid ah. Mashruuc cusub ayaa loo sameeyaa mid kasta JOBHaddii kale, waxay ii sheegi doonaan.
Xiriirka. Hadda saxaafadda icon, ama guji Faylka> Soo dir-hel. Markaa waxaan arki doonaa guddiga download, halkaas oo aan ku habeyn doonaa qaar ka mid ah xuduudaha:
En Settings, waxaan dhisi doonaa in dekaddu ay isticmaali doonto COM4, qiimaha baud ee aan dooranay 1200sinaanta ma jiro, xadhkaha xogta 8 oo joojiya qaniinyada 1. Tan waxaa la sameeyaa oo kaliya hal mar, mararka qaarkoodna waa inaad isku daydaa in ka badan hal deked.
Iyada oo badhanka Connect, xiriirka waa la tijaabiyay, iyo haddii ay dhacdo in la helo, saldhigga muuqaalka ayaa ku soo baxaya magaca:
Sidoo kale, badhanka ayaa isbeddelaya Connect ikhtiyaarka Ka jar.
Wareejinta. Marka la doorto, badhanka furaha ah (fallaadhaha dhexe), waxay kicisaa xawaaraha.
Eye, xilligan xaadirka ah waa in diristu ay noqoto mid ka shaqeyneysa xarunta guud, oo lagu xusay dhamaadka 2.
Ugu danbeyn, farriinta dhamaystiran ee wareejinta waa inay muuqataa. Sidee ku faraxsan tahay, lo'da aan waxyeello gaari karin.
Soo dejinta / Dhoofinta. Ilaa hadda, waxa aan qabannay waa wareejinta xogta. Si aan ugu dhoofno guddiga, waan sameynaa Faylka> Soo dejinta, waxaan dooranaa xirmo la soo dejiyey ka dibna waxaan arki karnaa macluumaadka qaaska ah.
Maxaa dhacaya waa in la dhoofiyo qodobada DXF. Ujeedadaas darteed, file > Maqnaanshaha, iyo beddelka dhibcooyinka leh faahfaahin dheeraad ah ayaa la xushay.
Post Previous«Previous Khariidadda Khatarta Siyaasadeed
Post Next Khariidadaha Google oo ka socda mashiinka Mobile 6Next »
37 Jawaab ah "Download dhejinta xogta"
su'aasha .. Waxaad ku dhajin kartaa xogta GOOBTA WADANKA sokkia cx-105 by bluetooh
GERARDO ALFONSO CASTRO ACUÑA isagu wuxuu leeyahay:
asxaab aan haysto xarun maple 822l halkaas oo aan ka soo dejisan karo barnaamijka xarunkan
Waxaan la saldhigga total Nikon 531 dtm u shaqeeya oo aanan ka heli kartaa saldhigga xogta aan si aan pc, Waxaan ku tirinayaa in software hallaabo, waxa ay noqon doontaa suurto gal ah si ay u caawiyaan i lumin xogta aan si aan PC. ama aad ka heli karto software cusub in ay dib. mahad
jimicsi isagu wuxuu leeyahay:
fadlan haddii qof iga caawin karo saldhigga sokkia ee dejiya 630rk dhibaatada aan qabo waa in rugtan la keydiyay waqti wanaagsan isla markaana waqtiga la isticmaalayo shaashadda uusan ka muuqan sawirkii sawirka xabsigaga ama kaarka ama leysarka Markaan sameyn lahayn dib-u-eegis furaha sft-ka kama dhigeyso mid ka mid ah xulashooyinkaan inay muuqdaan taas oo ah wixii dhacay fadlan waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa kaalmadaada mahadsanid.
jerhenri isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye waxaan haystaa sokkia set550rx oo markaan puntso la qaato waxaan helayaa leybe aniga oo aan haysan ikhtiyaarka leysarka ama ku soo boodda? Waa caadi ama waa qaabeyn kaliya fadlan yaa iga caawin kara in si weyn loogu mahadceliyo.
Saaxiibka ku jira faalladii hore waxay ku siinayaan xalka aad u baahan tahay inaad beddesho taariikhda, waxay noqon kartaa 2011 iyo in laga saaro fiisaha si loo saacadeeyo saacadda adoo adeegsanaya internetka iyo diyaar
VICTOR PIC isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiib, waan ku farxi lahaa haddii aad ii soo diri lahayd hage deg-deg ah oo saldhig guud sokkia power set 2000 ah oo lagu sameeyo sahanno isku dubarid ah, Tusaalayaal, baarkin, hagitaan, cabbir ka dibna aan ku arko shaashadda, maxaa yeelay waan soo degsaday buugga mana sheegayso waxba . Waad ku mahadsantahay hormarka, waxaan qoraa Venezuela, San Juan de los Morros, Gobolka Guarico.
Waxaan ka qoomameyneyno inaanaan kaa caawin karno arintan, maadaama sharciyadan meeshan aaney u ogolaaneynin faafinta waxyaabaha ku xad gudba xuquuqda daabacaadda.
Lenin isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waan idin salaamay Guatemala… pro-link or topconlink-gu aad bay ugu wanaagsan yihiin soo dejinta xogta saldhiga guud, waxaan hadda isticmaaleynaa saldhigyada taxanaha sokkia 330r iyo X laakiin welwelkeyga ama taa bedelkeed codsigeygu waa hadii qof awooddo Gudub ama ii sheeg meesha ay ka hooseyso'cadcad 2013 laakiin leh crack maxaa yeelay waa aaladdeyda shaqo, waxaan hadda la shaqeynayaa Civilcad 2008 laakiin waxaan durbaba doonayaa inaan cusbooneysiisto, fadlan sug jawaabtaada, waxaad igala soo xiriiri kartaa emaylkayga ...
Waad ku mahadsantahay xalinta Victor. Waxaan u maleynayaa inay faa'iido u yeelan doonto, iyo waxaan maqlay dadka dhibaatada ka qaba dhibaatooyinkan maalmo.
VICTOR CESUS isagu wuxuu leeyahay:
GREETINGS, FADLAN WAXYAALAHA DATA WAXAA LAGA HELAY KARTAA WAXYAALAHA IYO WAXYAABAHA KULANKA, WAXAAD KA HELI KARAA WAX KA QAADAN KARAA WAXYAALO:
1) Geli isku xigta (bannaan) oo isku xigta kasta oo xogta, tani waxay noqon doontaa madhan IYO FILA WITH XOGTA IYO WELL WITH FILE oo dhan
2) HADDII AAD QABTO XOGTA EE Excel (oo halkan PASAS ku txt A) markaas u baahan tahay in aad is geliso calaamad cutubka (ATAR) IN THE cell CODE XAQA soo socda, SO QAABKA AAD WAA SI FIICAN U NOQONAYO:
Aqoonsiga NEZ «ENTER» CODE (XAALADAHA KU SAMEE CELL)
N - HESHIIS AMA LAHAYN IYO
E - MACLUUMAADKA KORONTADA X
Z - LIFT AMA QUOTE
KODE - KODE ama DESCRIPTION
ENTER - PARAMETER MARK ama ENTER
HALKAN WAA MUHIIM AH INAAD GELI KARO “GAROODKA”, SIDII AAD KU HESHID DADKA 'EXCEL', WAAD KU SAMEEYAA DALKAAGA FARSAMADA IYO FARSAMADA [ALT] + [ENTER], SIDII AAD UGU HESHO AAD U aragto IN DILKA CELLADA UGU BILAASH DHULBAHAN, DONE MARKAAN AYAAD KU FARAXSAN TAHAY MACLUUMAAD AKHRISO
Waxaan rajeynayaa inaad faa'iido leedahay
carlos zamora isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclahay in aan ku qaataan xogta txt JDS for esacion waxa aan qabanayo la txt kala tabualaciones laakiin ProLink kaliya ee i tuso tirada INPARES iyo lammaane aan sameeyey, laakiin wax dhib ah maleh. Qofna ma yaqaan meesha qaladka fadlan caawin !! 1
johan pic isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan ka heli karo cable-ka guud ee saldhiga 'foif rts 538' tan iyo markii uu fiilooyinku lumay waxaanan u baahanahay inaan soo dejiyo xogta cidda i caawinaysa
Barnaamijka isku xirka Sokkia wuxuu joojiyay shaqada qof kasta bishii Maajo, laakiin waxaan helay xal, waa mid ku meel gaar ah waqtigan.
Waa inay dib u dhigaan taariikhda kumbuyuutarka ilaa Janaayo ama Febraayo waana taas.
XAGEE AYAAN KA HELI KARAA FOOMKA »U BAAHAN DIIWAAN GELINTA” SOKKIA LINK?
Waan dhibaataysnahay, Waxaan ahay 530r sokkia September 1 duurka oo aanan haysan cable iyo Bluetooth khasaaro xogta sababtoo ah sokkia link i weydiiso oo aanan u cusboonaynta kartaa. mahadsanid
Rafael Pabon isagu wuxuu leeyahay:
hello! waxa dhacay oo aan ka jawaabin casriyeynta <, sidee u cusbooneysiineynaa linkka sokkia? Waxaan u baahanahay inaan ka jawaabo hadda
Xidhiidhka sokkia ayaa sidoo kale joojiyay shaqada oo waxaan ubaahanahay baahida loo qabo casriyeynta, sidee baan u dhigi karaa barnaamijka?
REYNALDO SANTOS isagu wuxuu leeyahay:
Sidoo kale waxaan helay tan
Caawinta waxaan isticmaalaa linkka sokkia si aan u soo dejiyo dhibcooyinkayga, laakiin hadda ma gali barnaamijka aan u baahanahay hagaajinta u baahan, sida aan cusbooneysiiyo ama aan barnaamijka u maamulo
Gary isagu wuxuu leeyahay:
ONL MACIAS VALDEZ isagu wuxuu leeyahay:
roberto .... horeyna u cusbooneysiiyey qalabkii aad ujoogi lahayd
Enrique Arizabalo isagu wuxuu leeyahay:
Thanks, waan isku dayi doonaa ...
Ilaa faylkaagu furan yahay sida loo akhriyo oo keliya, waxay noqon kartaa inaad laba jeer furto, iskuday inaad "kaydiso sidii" oo aad u kaydiso sidii degg magac kale. Taasi waa inay kuu oggolaataa inaad wax ka beddesho adigoon dhib lahayn.
Hi subax wanaagsan Waxaan la yaabanahay haddii qof gacanta ee qaadan kara sameeyey baadhitaan Jooloojiyadda, oo dhex mari xogta laga saldhigga u PC iyo iyo isbedelka si format DXF laakiin aan la bedeli karaa in AutoCAD iyo waa markii ugu horeysay ee realiso howlgalkan haddii qof iga caawin kara waxaan u mahad celineynaa lahaa ......
Runtu waxay tahay inay igu adkeynayso inaan soo dejiyo xogta Waxaan haystaa prolink autocad 2011 iyo Civilcad, laakiin garan maayo waxa ku jira tallaabada ugu dambaysa.
Taasi waxay kuxirantahay nooca qalabka aad isticmaaleysid. Waxaan u adeegsaday Prokink natiijooyin wanaagsan.
Sidee ku saabsan salaan ka timid Guatt !!!!!!!
Compa jeclaan lahaa in ay ogaadaan sida ay u soo bixi in ka badan kun dhibcood ee saldhigga wadarta in computer ka aan la isticmaalayo barnaamijka TextPad laakiin ma ogola ii soo bixi in ka badan kun dhibcood jeclaan lahaa in la ogaado sida loo sameeyo ama barnaamijka loo isticmaalo sida haddii aan ku sameeyey Nicmada aad agradeceria !!!!!!!!!!
Maaddaama uusan furin faylasha, ma arkaysid xogta, ama ma waxay u muuqataa mid fariin fariin ah oo sheegaya in faylka aan la furi karin?
Waa inaad aragtaa nooca ay soo saaraan, waxaad isticmaali kartaa View View si aad ugu badasho qaabka aad isticmaalayso.
Haddii aad iigu soo diri karto tusaale ahaan dwg laga dhaliyey
si aan u arko haddii aan heli karo sabab kasta.
Waxaan u qoraa sababtoo ah waxaan ku jiraa biyo ilaa qoortayda. Waxaan bartay inaan isticmaalo wadarta guud iyo in la hirgeliyo xogta (transit-> topograph98-> autocad14) on pc. Dhibaatadu waxay tahay in autocad 14 uusan ka shaqeynin win7 iyo marka lagu rakibo xp (kumbuyuutar kale). My laptop wuxuu leeyahay win7 iyo autocad 2007 mana furayo dxf ama dwg foore ah oo aan abuuro shaxanka (pts, punching) Ma garanayo waxa la sameynayo, waxan isku dayay wax kasta oo aan ka helo internetka (oo la rakibi karo) mana jiro wax ... ma jiri doonaan xal kasta? Fadlan, qaar ka mid ah xogaha la isku halleyn karo ee iga soo baxaya.
Waad ku faraxsan tahay.
pjavic isagu wuxuu leeyahay:
Xarkaha dheecaanku wuxuu weligiis ahaa xanuun h ... noloshiisa oo dhan. Markay dekeddu ahayd mid taxaddar badan ma aysan bixin karin wax badan, waxaanna u malaynayaa in Sokkia ay bixin karto wax ka badan hal wado oo wax lagu soo dejiyo iyada oo lagu badali karo waxyaabo badan maanta. (Caano-barar, Bluetooth-ka, kaararka xusuusta, iwm.)
rakibi si ay u cusboonaysiiso
cusbooneysii barnaamijka rakibi
barnaamijyada lagu rakibo nooca 'prolink 1.15'
pedro silvestre isagu wuxuu leeyahay:
Faallooyinkaaga iyo "casharrada" ayaa iga caawiyay inaan ogaado hawlgallada GPS-ka hoosaadka iyo saldhigyada guud, illaa jaamacadda, markaan ka shaqeyno joornaalada, waxaan kaliya u isticmaalnaa theodolites elektiroonigga ah.
Haddii aysan ahayn wax aad u badan oo aad weydiiso, miyaad sii wadi kartaa mawduuca ku saabsan shaqada ka dib? Waxaan noqon lahaa mid aad u mahadcelin, tan iyo imika waxaan dhammeeyaa akhrinta shaqada dib u soo celinta gps waxaan u heestaa xiiso ii.
Salaan ka timid Guatemala.
PS: Haddii aad u timid Guatt si aad u bixiso koorsooyin, waxaad iiga sheegi kartaa, waxaan xiiseyn lahaa inaan ka qaybqaato oo aan wax badan weydiiyo, hahahaha (emailkaygu waa pgsilvestre@gmail.com)
Haa, waxaan hayaa liiska.
Emerson Marin isagu wuxuu leeyahay:
sidoo maqlo mawduuca, Todobaadkan ahaa heciendo a sahan qaab dhismeedka ku saabsan hantida deegaanka (Fosas guto ceel-soo-saarka qashinka saliid), haddii ay taasi ku tuurno ayaa nadiifinta hoos hababka bioremediation, laakiin waxaan waxaan ka helay qaar ka mid ah dhib badiyay xogta SOKKIA 630RK aan sidii uu ku sameeyey la Sokkia Link, aan lagu talinayaa in la isticmaalayo ProLink oo wuxuu arkay wax cusub aniga iyo waxa aan sharax in mawduuca ii adeego wax, hadda waxa uu noqon lahaa ku haboon haddii arrin of dhibcood dejinta sida ka 3d sokeeye ama dhul autocad mar horeba baaraandegi xogta la ProLink ayaa lagu dhisay, maadaama ay jiraan laba siyaabood oo aan ahay daraasadda, waa wadataa qiyaasay by xagal iyo masaafada iyo dhibic bartilmaameedka kale, waxaan qabaa in caawin lahaa dad badan oo jira taageerayaasha of blog this.
henry balcazar isagu wuxuu leeyahay:
runta, waan kuu hambalyaynayaa, waxay ii adeegi doontaa wax badan,